Madaxwayne Cabdi Muxuu Kala Soo Laabtay Gabalka Jarar? – Rasaasa News
Madaxwayne Cabdi Muxuu Kala Soo Laabtay Gabalka Jarar?
Mar 19, 2014 Atobiya, cabdi, dhagxbuur, madaxwayne, Somali
Jijiga, March 19, 2014 – Wararka laga helayo magaalo madaxda gabalka Jarar ee Dhagaxbuur, waxay sheegayaan in madaxwaynaha degaanka Somalida Cabdi uu kullan beeleed ku qabtay magaalada Dhagaxbuur oo uu joogay labo maalmood.
Madaxwayne Cabdi ayaa shirar gogola xaadh ah ku qabtay dhawr meelood oo ka tirsan gabalka Jarar, ka hor inta uusan kulankan balaadhan ku qaban magaalada Dhagaxbuur.
Socdaalka Madaxwaynaha oo lagu sheegay “nabad iyo biyo” ayay ujeedaddiisa dhabta ah ay ahayd safar calool xaadhasho oo ku salaysan khilaaf la sheegay in uu baryahanba ka dhex jiray madaxwaynaha iyo shacabka gabalka Jarar.
Maxwaayne Cabdi ayaa kulan fagaare ah oo uu ku qabtay Dhagaxbuur ka yidhi “maxaad ii necebtihiin, maxaanse idinku sameeyey reer Jarareedow.” Madaxwayne Cabdi, jawaabtii uu sugayey badalkeedii waxay noqotay, waxaan u baahanahay waxqabad iyo horumarin!
Madaxwayne Cabdi, oo kulamo gooni gooni ah la yeeshay jilibyada beesha gabalka Jarareed, ayaan sida la sheegay helin jawaabo qancisa ujeedada safarkiisa.
Madaxwayne Cabdi, ayay baryahanba saraayeen culaysyo badan oo kaga imanayey dawlada dhexe, ka dib kolkii ay cabashooyin u gudbiyeen dawlada dhexe waxgarad ka soo jeeda gabalada qaarkood. Cabashooyinkaas oo u badnaa culays militari, oo sida la sheegay uu madaxwayne Cabdi la beegsaday gabalo qaarkood. Dhawr goor ayaa looga yeedhay Addis Abab madaxwayne Cabdi, halkaas oo su,aalo la xidhiidha cabashooyinka lagu waydiiyey.
Lamana oga in khilaafka u dhaxeeya madaxwaynaha iyo beesha reer Jarareed, uu ku soo afjarmi doono safarkan iyo in xalka kama damaynta ah, lagu gaadhi doono Addis Ababa.
Cabashooyinka waxaa ka kid ah in lagu fasaxay ciidanka Liyuu Booliska, kuwaas oo dhaca xoolaha, kufsadana haweenka, laayana raga cid looga dacwoodaana ayna jirin. Ashkatooyinka waxaa loo isticmaalay jimlado culus oo ay ka mid ahaayeen “ama aan wadanka ka guuro ama dawlada federalka dhibaatada wax ha ka qabto.”
Culayska saaran shacabka Somalida Ogadeeniya, waxay Atobiya u adeegsataa qaar ka mid ah dadka degaanka, kolkaas ayey hadan dib ugu canaanataa dambiyada loo gaysto shacabka kuwa u shaqeeya.
Madaxwayne Cabdi, oo ah madaxwaynihii ugu horeeyey ee si furfuran uga hadla dhibaatooyinka ka jira degaanka Somalida, ayaa waxbadan ka qabtay xaga furfurnaanta iyo dagaalka Atobiya ay kula jirto Jabhada ONLF, ee u dagaalanta xoraynta Somalida Ogadeeniya. In kasta aad loogu xanto in uu isticmaalo awood uu ku muquuniyo cid kasta oo uu kaga shakiyo in ayna taageersanayn awoodiisa.